Axad 19 January 2020
Dad lagu Qabqabtay Nairobi
Mas’uuliyiinta Kenya ayaa maata Nairobi ku qabtay 5 qof oo looga shakiyay inay diyaarinayeen weerar argagixiso o ay ka fuliyaan gudaha magaalada Nairobi. 5-tan qof ayaa uu kala dhashay Kenya, Soomaaliya iyo qof haysta dhalashada Maraykanka
Berlin: Shirka Arrimaha Libya oo Furmay
Magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa ka furamay shir caalami ah oo la doonayo in xal loogu helo colaadda dalka Libya, sidoo kale la joojiyo saameynta iyo fareglinta ay Libya ku hayaan dalal dhowr ah kuwaasi oo kale taageera kooxaha ku dagaallamaya Libya
Jen. Xaftar oo Horjoogsaday Dhoofinta Saliidda
Ciidamo uu hogaamiyo General Khaliifa Xaftar oo ah nin mucaarad ku ah dawladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalka Libya ayaa horjoogsaday dhoofinta shiidaalka ee dalkaas, xilli lagu wado in maanta uu shir dib u heshiisiin ahi dalka Jarmalka uga furmo kooxaha ku dirirsan Libya
Dawladda Djibouti ayaa maanta si rasmi ah uga hadashay bayaankii dhawaan ka soo baxay shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP-World oo sheegtay in ay mar kale ku guulaysteen dacwad kala dhexaysay dawladda Djibouti, oo ay qaadaysay maxkamad ku taala magaalada London.
Kulan ku saabsan xiisadda Nile oo ka dhacay Washington
Wasiirada Arrimaha Dibadda Masar, Ethiopia, iyo Sudan, oo ay weheliyaan Wasiirka Maaliyadda Maraykanka iyo Madaxa Bangiga Adduunka ayaa kulan ku saabsan xiisadda webiga Nile ku yeeshay magaalada Washington DC.
Jeneral Haftar oo laga dhaadhicinayo inuu tago shirka Berlin
Wasiirka arrimaha dibedda Germany ayaa maanta tagaya dalka Libya, si uu jeneralka fallaagada ah ee Khalifa Haftar uga dhaadhiciyo inuu kasoo qeyb galo shir caalami ah oo looga hadlayo dagaalka Libya.
Hal sano kadib weerarkii hoteelka DusitD2
Muddo hal sano ayaa laga joogaa weerarkii darnaa ee ururka Alshabab uu ku qaaday hotel Dusit 2 ee magaalada Nairobi, kaas dad badan oo Soomaalina ku jirtay ay ku dhinteen.
Dagaal dhex-maray ciidamada iyo sirdoonka Sudan
Shan qof, oo ay ku jiraan laba askari, ayaa la dilay kadib markii ciidamada Sudan ay Maanta weerareen wakiilo ka tirsan sirdoonka laga baqo ee dalkaas oo gadooday.